महिला सर्जकलाई ...त्यो आवश्यकता पर्दैन तर खुबि हुनुपर्छ
असार १८, २०७६ सारङ्गी न्यूज
लघुकथाकार राजु क्षत्री 'अपुरो' एक दशक देखि साहित्यमा कलम चलाईरहनु भएको छ ।यात्रा जीवन भोगाइ नै उहाको साहित्यमा लाग्नुको प्रेरणाको स्रोत हो ।यात्रा संस्मरणबाट नै साहित्यमा प्रवेश गर्नु भएको थियोे ।
यात्रा संस्मरण प्रवासका भोगाइ र अनुभवहरू (मलेसिया सन् २००९ ),लघुकथा सङ्ग्रह मेरा केही लघुकथाहरू(बि स २०६९),भाग्य र कर्म (लघुकथा सङ्ग्रह बि .सं २०७३)र आशाका झिल्का (लघुकथा सङ्ग्रह २०७५)प्रकाशित भैसकेको छ।कास्की डायरी मलेसिया ( सन२००७),सिर्जनसिल कथाहरू सन् २००८ ( मलेसिया )र स्मारिका - क्षत्री समाज मलेसिया (सन् २०१०)सम्पादन गरिसक्नु भएको छ ।साहित्य ,सञ्चार र खेलकुद गरि झन्डै आधा दर्जन भन्दा बढी संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।तमु समाज पेनाङ मलेसिया (सन् २००८ ),त्रिशक्ती युवा क्लब, लाहाचोक, कास्की ( बि सं २०६८),मन्जरी थिएटर ग्रुप मलेसिया -सन् २०१७ र माछापुच्छ्रे गापा भुपु खेलाडी सम्मान बि सं -२०७५ सम्मान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । उहाँसंग मनु विद्राहीले गरको कुराकानी :
_ वैदेशिक रोजगारमा छु। बचेको समय साहित्य र समाजसेवा मा लागेको छु। सरकारको मात्रै मुख नताकी हामी आफ्नै गाउँ बनाउने अभियानमा लागेका छौ । आवश्यक पर्दा अर्थ सङ्कलन गरेर टेवा पुर्‍याइदिने काम गर्दै आइरहेको छु ।
_ साहित्य आफ्नो आत्म सन्तुष्टिको लागि कोरिन्छ। बिधा मार्फत आफ्ना भावना पोखिन्छ। साहित्यको आ-आफ्नै परिभाषा होलान् । मेरो बिचारमा साहित्यले समाजलाई नयाँ दिशा दिने कार्य गरेको हुन्छ। साहित्य समाजको ऐना भएको हो भनिन्छ। साहित्यले मानिसलाई बौद्धिक स्तरमा लैजान मद्धत पनि पुग्छ।
विदेशमा नेपाली साहित्यको स्थिति कस्तो छ?
_ विदेशमा साहित्यको माहोल राम्रो देखिन्छ । धेरै जसो सर्जकहरू बिदेश मै बसेर लेखेको पाइन्छ। पुस्तक प्रकाशन गर्ने , समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने आदि सुनिदै देखिदै आएको पाइन्छ।
झन्डै एकदशक पहिले र अहिलेको नेपाली साहित्यमा के भिन्नता देख्नु भएछ ?अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थितिको बारेमा कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
_ सामाजिक सञ्जालले गर्दा साहित्यको मार्ग अझ फराकिको भएको छ। धेरैले लेख्न सिकिरहेका छन ।कतिपय त निखारिसकेका पनि देखिन्छन् ।यो एउटा सकारात्मक पाटो हो।
पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखकको संख्यामा कमि देखिनु र पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखक पछाडी पर्नुको मुख्य कारण के होला?
_ तुलनात्मक हिसाबले केही कमि नै हो । तर अहिले महिला सर्जकहरूको ह्वात्तै वृद्धि भएको पाइन्छ। महिलाका आफ्नै विवसताहरू हुन्छन् । कतिपयले समय दिन सक्दैनन् ।
_ नातावाद कृपापाद नभएको पनि होइन । तर सबै ठाउमा यो लागू हुदैन। सशक्त महिला सर्जकलाई नातावाद र कृपावाद को आवश्यकता नै पर्दैन । हो मिडियाले साथ दिनु त्यति नराम्रो पनि होइन तर खुबि चाहिँ हुनुपर्छ ।
_ हाम्रो समाजमा लेखेर मात्र हुदैन लेखिए अनुसार व्यवहारमा ल्याउन सक्नु पर्छ। लेखेको साहित्य सबैले पढेका हुँदैनन पनि।
साहित्य मार्फत हाम्रो समाजका बिकृती बिसङ्गती सबै खाले विभेद , छुवाछूत ,महिला हिसाको अन्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
_ सरकारले बिभेदकारी नीतिको अन्त्य गदै राम्रा सर्जकहरूलाई लेखेर बाच्न सक्ने सम्मानित जीवन बिताउन सक्ने माहोल बनाइदिन सक्नु पर्छ भन्ने लाग्दछ ।
- नेपाली शब्दमा आगन्तुक शब्द जो आइसके आइसके तर थप अब आउनु हुदैन। नेपाली ठेट शब्द हुदाहुदै किन आगन्तुक शब्द प्रयोग गर्ने?
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केहि बाकी छ कि?
_ मलाई स्थान दिई पब्लिक माझ पुर्याउन सहयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद ।
बुधवार, असार १८, २०७६, ०६:०७:००